Usazoba wuhlupho uDrogba- Terry | News24
Usazoba wuhlupho uDrogba- Terry
Chelsea - Ukaputeni we-Chelsea uJohn Terry usencome inkakha yomdlali uDidier Drogba ngokuthi useyingozi futhi usazoqhubeka nokuba wuhlupho kubadlali basemuva.
Ngokombiko kwe-Soccer Laduma uDrogba osekhuza ibuya kwi-Chelsea, unconywe kakhulu uTerry wathi ukhombisa ukuzimisela okuyisimanga futhi amandla anawo omqondo akhombisa ukuthi usakulambele ukushaya amagoli.
“Kubalulekile ukuba khona kukaDrogba ngoba uletha umqondo wokufuna ukunqoba nakwabanye abadlali abasebancane,” kusho uTerry kwi-websstie yaleli qembu.
UTerry uphinde wazwakalisa ukuphatheka kabi kwakhe ngokuhamba kozakwabo ababili asedlale nabo isikhathi eside, u-Ashley Cole noFrank Lampard kanti ukholelwa ekutheni abadlali abasha abasayinwe yileli qembu bazoqhubeka lapho kushiye khona laba badlali.
UTerry usanda kumemezela ukuthi useyashiya ekudlaleleni iqembu lesizwe laseNgilandi njengoba esezogxila kwi-Chelsea kuphela.